TSY KI-VADIVADY FA TENA IZY par SWEET - Fichier PDF
TSY KI VADIVADY FA TENA IZY .pdf
Nom original: TSY KI-VADIVADY FA TENA IZY.pdfAuteur: SWEET
Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 13/11/2017 à 07:59, depuis l'adresse IP 197.149.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 2865 fois.
Taille du document: 267 Ko (29 pages).
FIDILALAO F. Henriel
Memeldono Ambohidrapeto 2017
Nosoratana ity boky ity ho anareo tanora indrindra indrindra, tsy natao
hampahatahotra anareo akory fa vao mainka aza entina hamporisihina antsika
handinika sy hanadihady tsara ireo lafin-javatra samihafa mikasika ny
fanambadiana. Tsapa tokoa manko fa miseho etsy sy eroa ny fifanolanana eo
anivon’ny tokantrano ary mitombo isa isan’andro ny mpivady mifampitory eny
amin’ny FItsarana ka mangataka fisarahana.
Fomba iray entina miaro ny fianakaviana izany izao famelabelaran-kevitra ataonay
izao. Ekena fa tsy manana andraikitra mivantana amin’ny “fampiofanana ireo olona
maniry ny hiroso amin’ny fanambadiana” izahay. Nefa na izany aza dia mba tehizara traikefa sy fahalalana momba ny fanabeazana izahay satria adidy masina eo
amin’ny mpiara-belona izany. Na dia kristiana aza ny mpanoratra dia ninianay
nojerena tamin’ny “maso laika” fotsiny aloha ity resaka fanambadiana ity. Mino
aho fa mbola ho avy koa ny anjaran’ny mômpera sy pasitera ary ny “révérend”
isany amin’ny fanehoana ny hevitr’izy ireo momba ny fanambadiana raha vakiana
araka ny Baiboly Masina.
Fiarovana ny fianakaviana tsy ho potika, fiarovana ihany koa ny Firenena tsy
hipatitaka, izany sy izany ary ry tanora isany no tanjona tianay ho tratrarina
tamin’ny fanoratana ity boky ity.
FANOMANANA AMIN’NY ALALAN’NY FANABEAZANA SY FAMPIANARANA
Sehatra goavana enti-manomana ny fanambadiana ry tanora ny fanabeazana sy
fampianarana, tsy zavatra mandeha ho azy na koa voajanahary toy ny iheveran’ny
maro azy akory ny fanambadiana.
1- Fifampikasohana amin’ny hafa
Sao dia hadinontsika ary fa olona roa samy hafa saina sy fo amam-panahy ange no
miara-miara miaina sy mikambana mba hamaritra ny atao hoe fanambadiana? Vao
kely izany ny zaza dia tokony zarina sahady hifampikasoka amin’ny olona samihafa.
Isan’ny manomana azy hahay hiara-monina amin’izay hovadiany sahady ny zavatra
toy izany. Misy anefa ray aman-dreny adaladala izay mamefy ny zanany tsy
hanatokatona ankizy hafa na olon-kafa satria misy zavatra atahorany ao, zary lasa
olo-manirery ny ankizy toy izany ka mampahatahotra ny fiaraha-miainany amin’izay
olona hovadiana any aoriana any.
Mba manana namana ary ve ianao io ? Efa nisainao hoe firy ? Ary iza no betsaka
indrindra, ny lahy sa ny vavy ? Misy antony manokana ve no mahatonga izany ?
Tena ilaina ny fananana namana hifampizarana ny hafaliana sy ny fahoriana.
Manefy ny toetsainao izany hizara fitiavana amin’ny hafa (tokony ho fitiavanamana aloha amin’ny vanim-potoana voalohany). Efa fianarana sahady koa io
hihaino ny hafa ary miezaka hitakatra ny olana mahazoireo manodidina ny tena.
3- Mahalala tena momba ny fitaovam-pananahana sy ny firaisana ara-nofo
Saro-kenatra sy be fadifady izay isika Malagasy. Tsy maninona fa mety ho misy
mahatsara azy izany satria toetra tena maha-malagasy izany. Saingy izao, mba
fantapantaro ihany ny momba ny taovam-pananahanao na lahy ianao na vavy.
Marina fa efa mianatra momba izany ianareo any amin’ny CEG sy Lycée saingy tsy
dia ampy loatra ny fahalalana atolotra anareo any. Azonareo atao ny mijery ny
Aterineto (internet) ka mandalina tsara ny toetoetry ny filahiana sy ny fivaviana. Ny
lahy tokony hahafantra momba ny vavy ary ny vavy koa tokony handinika momba
ny lahy. Fitaovana ireny ary rehefa fantatra tsara ny toetoetrany sy ny fomba
fiasany dia azo inoana fa tsy hampidi-doza intsony ho an’ilay mpampiasa azy. Ary
izao koa e, ianareo zavavy mba manontanintania ihany ny reninareo, torak’izay koa
ianareo zazalahy, aza menatra manontany an-drabaina e !
Ny zavatra faharoa dia ny firaisana ara-nofo. Rehefa miakatrakatra ny taonan’ny
ankizy dia matetika no mifampitantara resaka firaisana ara-nofo, indrindra fa ny
ankizy lahy. Mivadika ho anganongano sy nofinofy eo ilay izy ary lasa kivazivazy
fotsiny aza matetika ka tsy misy fanabeazana voaray akory hany ka mamoa-doza
Ratanora. Misy tanora sasany sahy miera tsotra izao amin’ny reniny hoe “efa
mahazo manao firaisana amin’ny sipako ve aho?” nefa matetika dia
fampitandremana sy fampiandrasana aloha no valiny azony. Tsotra ny antony
rankizy, tsy mbola vonona ny fitaovam-pananahanao sy ny sainao hiatrika izany
sedra izany. Aza adino fa na dia safofaso sy orokoroka fotsiny aza ange dia efa
manaitra ny retsika sy ny hôrmôna anatin’ny vatana e ! Manakorontana ny ao
anaty ao satria mampihazakazaka ny fiforonan’ireny hôrmôna ireny moa va tsy
voankazo mbola maintso nefa dia hotazana sahady. Tsy maintsy hanao izany
daholo ianareo rehetra ireo fa mahandrasa kely aloha. Ny tsy firosoana amin’ny
firaisana anefa tsy midika hoe tsy tokony ho fantarina ny mombamomba ny atao
hoe firaisana ara-nofo, ny zava-doza mety haterany toy ny aretina sy ny vohoka tsy
Any ivelany dia efa misy manam-pahaizana manokana mampianatra ny tanora
momba izany. Mba mila mpampianatra sy mpanoro hevitra koa ny tanorantsika fa
tsy vitan’ny fandrarana fotsiny hoe “Aza manao, aza manao” ity zavatra ity. Iza ary
no hatoninareo rankizy? Raha araka ny hevitro, aoka tsy ho menatra ny reny
hanorotoro ny zanany vavy, aoka tsy hasiaka fahatany ny ray hampianatra ny
zanany lahy. Mila mandray andraikitra isika olon-dehibe fa tsy hiafina lava ao
ambadiky ny hoe olo-pady, mahamenatra sns. Rehefa tsy hanoro ny zanakao lahy
ny rainy Ramatoa dia raiso ny andraikitra. Tsy voatery hivantambantana ny teninao
fa ataovy resaka vazivazy. Mety hahomby ny fomba fanabeazana toy izany. Aza
adino koa fa olona azo itodihana ry zoky lahy sy zoky vavy efa manambady.
4- Ny pelaka: ny fiarahan’ny lahy samy lahy na koa ny vavy samy vavy
Noho ny rivotra mitsoka ateraky ny fanatontoloana dia tafiditra tsikelikely eto
amintsika koa ny resaka pelaka, na lahy samy lahy izany na vavy samy vavy. Isika
Malagasy moa malaky dia malaky amin’ny fanarahana lamaody koa tsy dia
mahagaga loatra raha miroborobo ny zavatra toy izany amin’izao vanim-potoana
izao. Na dia fantatra aza fa fiarahana mivoana amin’ny mahazatra sy ny
nanabeazana ny tena ny pelaka dia tsy maintsy atrehan’ireo ray aman-dreny ny
zava-misy. Tsy misy angamba ray aman-dreny na mpiray tampo maniry ny
hahatongavan’ny zanany na ny havany ho pelaka. Zavatra manahirana anefa ny
hitsara be fahatany ny olona manaraka io lalana io satria tsy fantatra mazava hoe
afaka nisafidy malalaka ve izy sa noteren’ny fiovana nivoatra tao anatiny tao. Ny tsy
azo lavina kosa anefa dia misy zatovo sasany miova vetivety na miova tanteraka ho
pelaka satria mahazo vola noho izany zavatra izany.
Boky iray manontolo mihintsy angamba no ilaina hamahavahana ity resaka pelaka
ity, ny hany torohevitra ataonay eto dia izao: mila mandinika ny tanora ndrao
tafatsoropaka amin’ny zavatra tsy fanta-piafarana. Fantatrareo tsara ry tanora fa
raha diso fiantefa ny fitiavana dia hiteraka ratram-po tsy hay tohaina. Ny ray amandreny koa mila manara-maso sy mandrefy ny fivoaran-toetran’ny zanany.
5- Ny sary mamoafady entin’ny Aterineto
Zary lasa loza mitatao ho an’ny ankizy izy io satria mora dia mora loatra ny
fanokafana ireny pejy misy sary sy video mamoafady ireny. Taitra mialohan’ny
fotoana ny faniriana hanao firaisana ara-nofo vokatry ny fijerena ny zavatra toy
ireny ary mazàna mandiso ny fiheveran’ny ankizy ny atao hoe fanambadiana izany.
Mila mihaino ny anatra ataon’ny ray aman-dreny ianareo mba tsy ho voatarika
hijery ireny zavatra mamoafady ireny. Poizina ho an’ny saina amam-panahy ireny
rankizy ary tandremo fa ireny no mitarika anareo ho any amin’ny lalan-dison’ny
fanolanana sy ny vohoka tsy niriana. Mety hivadika aretin-tsaina mihintsy aza
ohatra ny fijerena sary na video mamoafady izay ahitana olona manao firaisana
amin-javatra na amin’ny biby !
Mety ilaina amin’izay kosa angamba ny hanokafan’ny mpanabe sy ny sekoly
adihevitra momba ity fijeren’ny ankizy sary na koa video mamoafady ity. Tokony
hialana amin’izay ilay fahazarantsika manakobokobona ny zavatra toy izany. Rehefa
manambady ianareo any aoriana any dia ho tsapanareo fa tsy hanaiky ho
zimbazimbaina sy hoviraviraina toy ny biby ny andefimandrinareo koa ajanony
dieny izao ny fangalaranareo mijery ireny zava-doza ireny.
6- Ny raharaha ao ankohonan’ny Dada sy Neny
Mba jereo ange ny fiainan’ireo namanareo e ! Misy ankizy izay tena tsy mandray
ravin-dena mihintsy satria “mianatra hono izy”. Zavatra tsy azo ekena izany. Marina
fa manana mpanampy izy ireo any an-tranony any ka mety tsy hisy raharaha
hataony intsony. Nefa tokony tsy hozarin’ny ray aman-dreny hiraviravy tanana ny
zanany. Ny tokantrano rankizy dia azo oharina amin’ny orinasa iray ka ny olona
tsirairay ao anatiny no mampihodinana ilay orinasa.
7- I Dada sy Neny no fitaratry ny zanany
Manome sary ny fitaratra ary amin’ny lafim-piainana rehetra io, sary mety ho lasa
môdely ho an’ny zanaka aman-jafy. Ny olana anefa dia misy ny môdely tsara nefa
koa ao ny môdely ratsy. Mazana tsy hain’ny ankizy kely ny manavaka ireo fa dia
halainy tahaka an-jambany any fotsiny ny zavatra ataon’ny ray aman-dreniny. Raha
mifankatia tsara i Dada sy Neny dia hotsapan’ireo naterany ny fitosak’izany
fitiavana izany ao an-tokantrano. Raha miady lava kosa izy ireo dia manjary miaina
fitaintainana lalandava ny ankizy. Ohatra fotsiny ireo zavatra roa ireo saingy hisy
fiantraikany any an-tsaina sy am-pon’ireo ankizy izany zavatra izany mandrampahafatiny. Ho hita taratra any amin’ny tokantranony izany rehefa lehibe izy ireo.
Na izany aza rankizy, aza mety mandray lesona ratsy avy amin’ny ray aman-dreny
ianareo, efa fantatrareo fa ratsy ny misotro toaka, mifoka sigara sy rongony, miteny
sy manompa ratsy, mamono vady…
Zary efa fahazarana izany fanaovana sipa izany ankehitriny, lasa lamaody satria ireo
tanora manodidina samy manana ny azy. Dia efa ohatran’ny gisitra ery raha tsy
mba manao izay fanaon’ny hafa. Tandremo anefa fa ahitan-doza ny manaraka
lamaody tsy manendrika ny tena.
1- Fitiavana mitsiry sy fitiavana miredareda
Vao mipaika kely ny vanim-potoanan’ny adolatsento dia injao fa mitsidika koa
Rafitiavana. Manomboka menamenatra sy mitokatokana izay ny zatovo, tsy tehilalao intsony satria menatra sy matahotra hojeren’ny sasany. Zavatra voajanahary
izany. Miha-mafy anefa ny fidoboky ny fo rehefa ela ny ela ary teraka ho azy ilay
faniriana hitia sy hotiavina. Manomboka amin’izay ny “fifampikaotiana” araka ny
voambolana fampiasanareo tanora. Ny zatovo lahy toa manao voady anaty hoe
“tsy maintsy zakako iny sipa iny”, ny ankizivavy kosa sahiran-tsaina fatratra ny
amin’ny hoe “Hanaiky ary ve aho sa handa ?”. Samy miteraka adin-tsaina ho azy
ireo avokoa izany zavatra izany ary ny tena loza dia misy fiantraikany ratsy any
amin’ny fifantohana amin’ny fianarana ny fanombohana manao sipa.
2- Aza manara-damaody sy ny fandrisihan’ny namana
Tsy tokony ho lamaody ny fanaovana sipa. Aza manaiky tarihan’ny namana hanao
sipa kanefa ny fonao mbola tsy taitra amin’izany akory. Misy fotoanany ny zavatra
rehetra ary tsy tokony hihazakazahana izany satria ny fanambadiana ange avy eo ka
fiainana ara-pitiavana izay haharitra mandram-pahafaty e! Tandremo fa misy ankizy
namana izay tena “manera” mihintsy ka mitatitra ny fanirian’ny hafa anao ho
sipany. Mila mametraka fanontaniana amin’ny tenanao ianao io : “hataoko inona
moa sipa ? Tena ilaiko ve izany zavatra izany amin’izao vanim-potoana izao ?”. Aza
miady saina irery momba izany ianao fa resaho amin’ny Dada na i Neny na i zoky ny
zava-misy. Ny torohevitry ny namana matetika tsy mitondra any amin’ny lalana
tsara, ny antony dia ilay manoro hevitra anao aza ange ka mitovy olana aminao e,
izany hoe olona tsy manana traikefa amin’ilay fitiavana akory. Tsy misy raikipohy
majika (formule magique) ny amin’ny hoe tokony hanao sipa na tsy tokony.
3- Firaisana ara-nofo sy ny fiantraikany
Efa tena niova ny fisainana satria maro ireo mpisipa no efa manao firaisana aranofo na dia voararan’ny ray aman-dreny sy sazian’ny lalàna eto amintsika aza izany.
Mandrehitra sy mampiredareda ny filana ny fiarahana any amin’ny takotakona, ny
fifanorohana sy ny safosafo isan-karazany. Mazana ilay zazalahy no mitondra ny
baolina ka manafosafo sy mikitika ny faritra izay mampahalemy sy mampivaha ny
fiarovan-tenan-drazazavavy. Mila miaro tena amin’ny tovolahy toy izany ny
tovovavy satria ny tanjony dia ny hamiravira avy hatrany mba ahazoany
fahafinaretana. Misy hevi-petsy lalina izany ary saronany teny mamy sy fanomezantoky zato taonina mba hampanekeny anao. Tandremo fa firaisana indray mandeha
monja dia mety ahabevoka vehivavy iray !
Misy fiantraikany ratsy ny fanaovana firaisana ara-nofo Rankizy. Ny voalohany
indrindra dia ny vohoka tsy niriana. Fahafaham-baraka ho an’ny fianakaviana
manontolo izany bevohoka tsy manambady izany ho an’ny Malagasy. Saingy indrisy
fa efa tsy toe-tsaina Malagasy intsony ny iainantsika amin’izao fotoana izao. Ny
loza hafa koa dia ireo areti-mifindra vokatry ny firaisana ara-nofo, isan’ireny ny
areti-mahafaty MST/SIDA ankoatr’ireo izay efa mahazatra toy ny angatra, ny tety
sns. Tandremo fa firaisana indray maka monja dia mety hampiditra aretina ao anaty
tenan’ny lahy na ny vavy !
4- Fantatro tsara ve ny ny sipako ?
Ny mahamaika ny tanora dia ny endrika amam-bikan’ilay olona hosipainy. Dia avy
eo ny fomba fitafiny, ny firavaka fitondrany, ny fananany sy fitondrany môtô na
fiara … Toetra voajanahary eo amin’ny tanora io fahataitairana noho ny endrika
ivelany io. Marina fa sarotra ny mamantatra toetr’olona iray nefa tsy maintsy atao
izany raha vantany misary zoro aminao ny tovolahy iray na koa manomboka
taratara aminao ny sipakely iray. Izany no antony ilazana eto hoe mahandrasa
aloha, mila saina matotra ny fitiavana olona iray ndrao miantoraka amin’ny hazo
5- Aza tonga dia miditra lalina aloha…
Io no fahamatorana voalohany. Mila mitandrina, mihaino sy mitadidy tsara izay
tenininy, mamadibadika tsara izay valin-teny homena azy, manadihady an-kolaka
izay tsara ho fantatra momba ilay hosipaina sns. Matetika dia ny zazavavy foana no
mizaka ny tsy mety ka mba mailo, aza manaiky hiditra amin’ny toerana kizokizo sy
mitokatokana, aleo tsy mifanafosafo sy mifanorokoroka izany mihintsy aloha.
Fifankazahoana am-po no atao hoe fitiavana ka raha mety dia aleo ny fo no
mifampiresaka, ny maso no mifampita fahatsapana fa ny vatana aleo aloha mba
hiandry ny fotoana maha-vonona azy. Andeha oharintsika amin’ny fiampitana rano
ilay fisipana, manomboka mitsaka rano ny tongotrao ka rehefa hatreo an-kitrokely
ny haavon’ny rano dia mijanona kely aloha maka saina: mahay milomano ve aho,
sao dia misy voay io rano io, iza no hamonjy ahy raha misy ranon-trambo tampoka
?Tsy fahavendranana velively akory no miandry.
6- Olana samihafa : fampirafesana, tsy fahamatorana …
Fanomanana anareo amin’ny fanambadiana ny tanjona kendren’ity boky kely ity.
Azo tarafina sahady eto amin’ny vanim-potoanan’ny fisipana ny toetran’ireo
mpisipa: mifankatia sy mifampitsinjo ary mifampitsimbina ? Sa tsy mahatan-damba
sy tsy an-dalovana tovovavy na tovolahy hafa ? Mba mpanaja fotoana sy mpanaja
olona ? Ho anao mbola tsy tafiditra amin’ny fisipana io, tsarovy fa mety ho lalana
diavinao izany hampirafesin’ny sipanao amin’ny olon-kafa izany. Olana goavana
miteraka fifandroritana sy mety hitarika any amin’ny famoizam-po izany koa jereo
tsara ny lalana diavin’ny tongotrao.
7- Fisarahana sy fahadisoam-panantenana
Fomban-javatra izany ka ! Misaraka ny mpifankatia rehefa mandringa ilay fitiavana.
Mihena na foana ny fitiavan’ny anankiray ary efa an-dalana mifindra mankany
amin’olon-kafa. Amim-pahatsorana no ilazako eto fa ilaina ny zavatra toy izany
mba ahatsapan’ny tanora ny tena dikan’ny fiainana: tsy mandeha ho azy akory izao
rehetra izao. Mila miaina izany fisarahana izany, mila mahatsiaro maharary ao ampo ao mba handraisanao lesona amin’ny fiainana. Mety hisy ny fahadisoampanantenana, tena mafy izany nefa mianara mitraka moramora, mianara miova
tsikelikely mba hivoahanao mpandresy satria tena ady izany fitiavana izany. Ady
atrehina isan-tsegondra ny fitiavana mba ahazoanao mitazona ny fon’ilay olontianao ! Mahaiza mizara izay mavesatra amin’ny ray aman-dreninao, amin’ny
mpiray tampo aminao, amin’ilay namana tena mahatoky anao. Ny entan-jaray
manko mora zaka. Ho hitanao fa efa fiadiana goavana anananao ary ho entinao
miatrika ny fiainam-panambadiana izao fahavoazanao izao. Aza kivy e!
8- Fiaingana vaovao sy fanefena toetsaina ho matotra
Tsy misy maniry zava-dratsy ho an’ny tenany (na ho an’ny hafa koa) fa ny zavadehibe dia ny fahaizana manodina ilay “faharesena” ho fandresena. Ny toetsainao
mihintsy ange no voasedra, voatefy ary manjary matotra ianao manoloana ny
fiainana taorian’ireny zava-nitranga ireny. Ataovy ho fiaingana vaovao ho anao
izany, ataovy tsapan’ny rehetra fa niova ianao, niha-tsara, niha-matotra ka tsy ilay
bandy kely na ilay sipa kely adalan-tsipasipa iny intsony, rebodreboky ny bika
9- Mitady vady sao dia antitra ampijoroana
Tsy fantatro na mbola manana toetsaina hoe ny fanambadiana no tanjona eo
amin’ny fiainana ny ankamaroan’ny zazavavy malagasy ankehitriny ? Hany ka raha
vao dila ny faha-18 taona dia manomboka miasa saina, manahy, matahotra ndrao
dia “tsy misy mpikaoty intsony” ka tsy hahazo vady. Ary dia iny Razazavavy fa
miezaka mampidera bika aman’endrika, mamonjy fotoan-danonana etsy sy eroa ho
hitam-bahoaka. Ary mazàna aza dia “mikaoty lehilahy” na manadala vadin’olona
no iafarany satria tsy mahandry ny anjarany. Izao anefa atao an-tsaina: ny
fahatsaran’ny toetranao no mahasarika voalohany ny fiaraha-monina aminao. Ary
mba manàna koa moa finoana fa ny fanambadiana ange ka anjara sy
10-Vady toy inona moa no noeritreretiko ?
Vitsy amintsika no manomana ny zanany hametraka io fanontaniana io. Voalazako
teo ambony teo fa anjara sy tendry ny fanambadiana saingy tsy midika akory izany
fa tsy misy andraikitra raisinao tanora io eo amin’ny fiainanao. Dia ho anjara sy
tendry fotsiny ve ny nahabevoka ilay sipa niaraka taminao ? Tandremo ihany a
!Fariparito mialoha ihany izay toetoetra tianao sy sahaza anao: bika aman’endrika,
fahaizany mifandray aman’olona, fahaizana amam-pahalalana ananany,
tantaran’ny fianakaviany, tantaram-piainany manokana, harin-kareny, mahay
mihaino sy mandray lesona sa tsia … ary ho an’ny ankamaroany dia miampy hoe
olona mivavaka sa tsia. Mila mamaritra masontsivana maromaro ianao mba
ahazoana sary an-tsaina ilay ho vadinao rahatrizay. Mety hiova eny an-dalana ireo
mason-tsivana ireo saingy efa mba tsy mamantana any an-kady avy hatrany aloha
ny lalana alehanao. Dia izao koa e, mba miresadresaha mikasika izany amin’ireo
olona ao an-trano, amin’ny namana akaiky, amin’ny mpanabe sns satria ny hevitra
tsy azo raha tsy amin’olombelona, hoy ny Ntaolo malagasy. Na izany aza, mila
mitandrina koa satria raha fatra-pitady ny tsara sy ny tomombana eo ianao dia
mety ho lany andro…Tsy voatery ho hitanao taratra sahady amin’ilay sipanao ireo
toetra tianao ireo, manampy anao handray fanapahan-kevitra anefa izany.
Hitantsika teo ary fa zava-dehibe io vanim-potoanan’ny fisipana io satria mety
hanefy ny toe-tsaintsika sy ny fomba fijerintsika ny atao hoe fitiavana. Ny traikefa
azo mandritra io vanim-potoana io dia mety hamaritra ny hoavin’ny mpivady atsy
ANKATOKY NY FANAMBADIANA
1- Fanambadiana noho ny fitiavana ? Noho ny fanerena na koa hena-maso ?
Noho ny fifanarahana manokana ?
Mibosesika be izany fanontaniako izany nefa ilaina valiana araka ny tokony ho izy.
Rehefa maminavina ny hivady ny tanora (na ny antitra koa aza e!) dia tokony
hisaintsaina ireo fanontaniana ireo satria ny valiny izany no fotrotra mampisy ilay
tokantrano. Vao eo am-panombohana ary ry tanora dia apetraho tsara ILAY
FOTOTRA. Tsy olana mihintsy ny antony ivadiana RAHA TENA IFANARAHANA, RAHA
TENA TENY IERANA. Ny zava-dratsy indrindra angamba dia ny fanambadiana
terena. Misy aza milaza fa teraka ho azy eny an-dalana eny hono ny fitiavana ho
an’ireo nivady noho ny fifanarahana manokana. Tsy fantatro hoe hatraiza ny
fahamarinan’izany zavatra izany. Mazava ho azy fa raha mody tia ny anankiray dia
ho rava ilay tokantrano rehefa hibaribary ny laingany sy ny fihatsaram-belatsihiny.
Misy tanora sasany mikendry tombontsoa matoa manaiky hanambady olona iray
saingy mila mivonona hizaka ny vokatr’izany any an-tokantrano any Tompoko satria
hotsapan’ny fianakaviana foana, indray andro any, ny toetsainao nisafidy hanao
zavatra toy izany.
2- Mila teti-panorona iraisana mba hiaraka hanangana
Mieritreritra ny hivady ianareo roa ? Toy ny olon-droa hiara-hamakivaky lalandavitra feno tsilo, lavaka, voninkazo, renirano, tendrombohitra, lohasaha mangina
misy mpanakana… izany. Mila miray saina dieny izao ianareo roa, miaramametraka teti-panorona mba ahafahanareo miaro tena amin’ny fahavalo, miaramigoka fahafinaretana, miara-manorina zavatra iray na maromaro ho anareo sy ny
taranakareo. Mila miara-manonofy ary samy vonona hiara-hanatanteraka izany.
Miara-mivonona koa hiatrika ny adidy sy ny zava-doza mety hitranga satria
fomban’ny fiainana daholo izany.
3- Fantatro tsara ve ilay olona hovadiako ?
Misy hono nisipa valo taona vao nivady, ao koa ireo izay zara raha niaraka volana
iray tonga dia natao mariazy. Tsy ny fotoana naharetan’ny fisipana sy ny
fifankahitana akory izany no mamaritra ny fanapahan-kevitra hivady. Tsy misy tsara
toy ny mba mifampitazana kely kosa aloha e ! Ary amin’io fotoana io no iezahanao
mamantatra ilay olona miaraka aminao (jereo II.10.). Samy hafa ny fanabeazana
azo, samy hafa ny kolotsaina nitaizana ny tena, tsy mitovy ny fari-piainana…ka aleo
mba fantapantarina tsara aloha ndrao tratran’ny toetra ratsy izay tsy ampoizina
akory. Ary mba fetsifetsy moa e, toy ireny pôlisy manao famotorana ireny ka !
Satria tsy maintsy hanafina izay tena toetrany ilay olona miaraka aminao raha
mikasa hanao zava-dratsy aminao izy.
4- Fiovan-toetra tampoka
Tsy voatery ho ratsy akory izany a ! Nefa mila mailo ihany koa ianao. Aza mijery
arina an-tava satria tianao ilay olona, raha misy toetra na fihetsika tsy azoazonao
dia teneno izy, anaro izy ary azavao aminy ny antony tsy maha-mety ilay zavatra.
Ny atahorako fotsiny dia ilay toetrany mody mamitsaka mandram-pahazo ilay
5- Virijiny sa dabaloaka ?
Mbola tokony hipetraka ve ny fanontaniana toy izany amin’izao andron’ny
fandrosoana izao, hoy ny tanora sasany. Isika rehetra no samia mieritreritra. Ilay
fomba fiteny hoe dabaloaka moa dia tena fanompana ataon’ny fiaraha-monina
amin’ny zazavavy izay nanaiky holalaovin’ny lehilahy tetsy sy teroa. Saingy safidy ny
an’ny zazalahy izay manaiky hovadiny. Aoka kosa tsy hifandatsana ao antokantrano izany resaka virijiny sy tsy virijiny intsony izany satria toe-javatra efa
fantatr’ilay tovolahy izany talohan’ny nampakarany ilay tovovavy. Ka inona ary no
tsara aminao tovolahy io e: virijiny jefijefy sady tsy mahazaka tokantrano sa
dabaloaka niova fo ? Vava-kisoa misy sira io zalahy ka tokin’izay hanana azy.
6- Sakana isan-karazany
Tsy tambo isaina io a! Aza mihevitra mihintsy ianareo roa fa rehefa mifankatia
ianareo dia mandeha ho azy ny zava-drehetra. Misy ny sakana ara-panjakana
(taratasy tsy ampy, fepetra tsy voahaja…), ny sakana eo amin’ny ray aman-dreny sy
ny fianakaviana noho ny antony izao na izao, ny sakana ara-piaraha-monina
(kolotsaina tsy mitovy, antokom-pivavahana samy hafa…), ny sakana amin’ny ho
enti-manana ilay raharaha, sakana ara-pahasalamana (misy fahasembanana ny iray
7- Ny herisetra am-panambadiana
Ninianay natao aty alohan’ny fanambadiana ity zanakevitra ity satria mazàna hita
taratra sahady aty amin’ny vanim-potoanan’ny fisipana izy io. Raha tsy voaova
dieny eto io toetra ratsy io --- na ho an’ny lahy na ho an’ny vavy --- dia hisy loza
mananontanona ilay tokantrano vao hiorina. Aza adino fa ny herisetra dia tsy ny
fifampikasihan-tanana ihany akory fa ao koa ny taim-bava mihoam-pampana sy ny
fampijaliana ara-tsaina samihafa. Mampametram-panontaniana ihany izany hoe
tena tianao marina ve ilay olona nefa dia ampiharanao herisetra ? Tsy dia lôjika
loatra izany zavatra izany.
8- Fiofanana alohan’ny fanambadiana
Tena ilaina io ry tanora ! Mila manatona mpanabe sy olona manana traikefa
amin’ny fiainam-panambadiana ianareo roa. Marina fa tsy maintsy miofana hono
vao manaiky hanao ny fanamasinana ny Pasitera sy Mômpera. Nefa manatona koa
olon-kafa hakana hevitra, miaraha-midinidinika amin’izay efa manan-tokantrano
mba hahalalanareo ny pitsopitson’izany atao hoe “miara-monina” izany. Mba
anontanintanio ohatra ny fomba fifandraisan’ny vinanto sy rafozana, ny zaodahy sy
zaobavy, ny havan’ny lahy sy havan’ny vavy, ny fitantanana ny vola ao antokantrano…Ny tsininy kely amin’ny fampiofanana any amin’ny Pasitera sy
Mômpera dia ny tsy mba hiresahan’izy ireo lalindalina kokoa ity olana mikasika ny
firaisana ara-nofo eo amin’ny mpivady ity.
9- Fizaham-pahasalamana alohan’ny fanambadiana
Tsy terena io raha jerena ny lalàna eto amintsika. Eritrereto ihany anefa fa olona
hifanome taranaka ianareo roa ka tsara raha mba tiliana mialoha ny zavatra tsy
mety any anatin’ny tsirairay any avy. Ao koa anefa ny tahotra sao dia mahafantatra
zava-doza miafina. Raha izany ary, tsy maninona izany fa dia akipy ny maso sady
apoka amin’ny rindrim-bato ny loha ka izay lalany any lalany ? Fanontaniana
mipetraka amin’ny tsirairay amintsika izany.
10-Fanomanana miaraka ny raharaha
Eto dia efa tokony ho hitanao taratra ny firaisan-tsainao amin’ilay ho namanao.
Mila mahay mandrindra zavatra satria tsy ianareo roa irery no iankinan’ny
fanatanterahana ilay fanambadiana. Mila mahay mandresy lahatra amin’ny fomba
mihaja, amin’ny fomba tena demôkratika. Ary tsarovy fa tsy hoe resy akory ianao
raha mandefitra amin’ny lafin-javatra sasany. Ny fanomanana fanambadiana ao
anatin’ny fifandritahana dia efa milaza sahady fa tsy samalamala ilay tokantrano
haorina. Tsy zava-mora na dia ny fividianana ny zavatra ilaina amin’izany fotoandehibe izany aza, ny famaritana ny isan’ny olona hasaina (Iza no hasaina ary iza no
hajanona ? Sao dia ahazoana tsiny ?...). Tsarovy Razazavavy fa na dia ianao aza no
hiakanjo ilay akanjo hovidiana, mba tsara ihany ianao mihaino izay hevitry ny
rafozambavy na ny zaobavy momba izay ho bikany sy lokony. Mahatsara
fihavanana ny zavatra toy izany. Ny toetra miolonolona irery sy milaza azy ho
mahavita tena izany dia mety hamoa-doza aoriana kely ao.
11-Resaka fihariana sy toebola
Amin’izao fotoana efa mandroso izao dia tsara raha samy manana anton’asa ny
lahy sy ny vavy. Sarotra ny fiainana koa ilaina ny fifanampiana sy fifamenoana ao
anaty tokantrano. Tokony ho voafaritra mialoha ny fomba ho enti-mitantana ny
vola ao an-tokantrano rahatrizay. Tena zava-dehibe iankinan’ny fiainan’ny
tokantrano izany ny fidiram-bola ka aza sodokan’ny hoe “andao hivady fa rehefa
ao ny fitiavana dia mivaha daholo ny olana rehetra”. Tsia Tompoko ! Ny vola no
hozatry ny fiainana ka aza mandeha an-jambany ndrao hijalijaly ny ankohonanao.
Aleo mihintsy tsy miroso amin’izany fanambadiana izany raha mbola tsy mazava
tsara ny resaka fivelomana. Tsy velonao amin’ny rano mangatsiaka (na ny ranon’ny
JIRAMA aza izao efa lafo a!) ny vady aman-janakao. Miantefa indrindra amintsika
lehilahy izany resaka izany satria ny lahy no lohan’ny vavy araka ny fomba
mahazatra ny fiaraha-monina malagasy. Sa tianareo ny hiaritra lava ao amin’ny ray
aman-dreny ka mety ho voalatsalatsa sy ho tondroin’ny hafa molotra ? Midika
izany fa matoa miditra amin’ny fanambadiana dia efa manana io fahamatorana
ara-bola io, mety tsy hanana ny ampy nefa mba mahavelon-tena kosa. Aza lany
andro mampiaraka ary Tompoko fa samia milofo mitady asa aloha ianareo roa !
Hitantsika teo izany fa ilaina tokoa ny fitiavana saingy tsy ampy izany hananganana
tokantrano vonona sy vanona. Tokony ho hita taratra eto sahady koa ny firaisantsainareo roa eo amin’ny fanomanana ny raharaha ary eo amin’ny famaritana ny
fomba hitantanana ny vola ao an-tokantrano.
1- Herijika fototra: fitiavana, fifanarahana ary firaisan-tsaina
Miverina foana ireo zavatra ireo amin’izao dinidinika ataontsika izao. Aoka mba ho
ny fitiavana no fototra iorenan’ny tokantrano, raha mbola tsy misy io --- noho ireo
antony isan-karazany nofakafakaintsika tery aloha --- dia aoka hiezaka amin’ny
fisiany ny mpivady. Raha mijery ny tantara fahiny isika dia nisy tokoa ny vady
namboarina tamin’ny andron’ny Ntaolo, tena naharitra ny ankamaroan’izy ireny
satria teraka tsikelikely tao amin’izay roa tao ny fitiavana. Nifanaraka sy niray saina
tsara izy roroa, nifampitsimbina sy nifanohana ary nifampiaro. Tsy ho voatanisa eto
ireo matoateny manondro ny asa mampifamatotra ny mpivady. Rehefa tsapan’ny
iray fa tiana izy sady tia koa dia misy hery manosika azy hiezaka be be kokoa,
hanao ny tsaratsara kokoa. Tokantrano misy fitiavana no sady feno fifaliana
2- Anjara toeran’ny fifampitokisana
Isan’ny matoateny goavana ao anaty tokantrano ny “matoky” sy “mifampatoky”
satria izany no antoky ny fahalemana sy fahatoniana ao. Mety tsy ho toetra raikitra
ao anatinao io saingy ianaro raha ilaina izany. Aoka re mba tsy hisy ity fisavana ny
lisitry ny antso natao na voarain’ny vadinao tamin’ny findainy ity ndrao
hanakorontana zavatra betsaka. Tokony mba hiera amin’ny vadinao ianao vao
manokatra ny taratasy nalefan’olona tamin’ny anarany. Ary satria miaina amin’ny
vanim-potoanan’ny teknôlôjia vaovao isika izao, diniho tsara ary ifanakalozy hevitra
aminy hoe tena ilaina tokoa ve ny ahafantaran’ny iray ny “teny miafina” ao amin’ny
Facebook-nao na ny adiresy Aterineto amin’ny anaranao. Tena ilaina ve sa mba fitia
te-hahafantatra fotsiny ? Ekena fa tsy tokony hisy zavatra hifanafenana nefa dia
mino ve isika fa amin’ny maha-olombelona fotsiny izao dia tsy hisy mihintsy zavatra
iray izay tsy hahakasika ny hafa fa mikasika antsika fotsiny ? Fanontaniana
filôzôfika sy etika izany ka anjaran’ny tsirairay ny mamaly azy ary tsy maintsy
ampifandraisinao amin’ny resaka fahafahan’ny tsirairay ihany koa. Aoka ny
fanambadiana tsy ho sehatra fanagejana ny fahafahana maha-olombelona.
3- Anjara toeran’ny firaisana ara-nofo:”Sao dia heverinao fa makorela ary
Samy manana ny tantaram-piainanany talohan’ny fanambadiana ny mpivady ary
tsy tokony hatao zavatra hifandatsana izany. Tsy voatery hotantaraina anao avokoa
ny marina rehetra satria tsy voatery hahasoa ny fiainan’ilay tokantrano ny
fahalalana izany. Isan’ny fototra ijoroan’ny fanambadiana ny firaisana ara-nofo ary
mety ho antony maharava ny tokantrano ny faharatsian’ny kalitao amin’izany
firaisana ara-nofo izany. Ny zavatra ialana voalohany dia ny fanaovana firaisana ankerisetra, tokony hifanarahana ny zavatra rehetra. Aza heverintsika fa mandeha ho
azy ny resaka firaisana ara-nofo. Mazana dia fiadiana eo am-pelatanan-dRamatoa
ny fidongiana tsy hanao firaisana noho ny antony maro samihafa. Aoka
hifampiresaka ary aza andrasana ela loatra ny zavatra toy izany. Ho an’ny lehilahy
sasany izay tia manandrakandrana zava-tsy mahazatra ny vadiny dia mazana no
mahazo vava ratsy hoe :”Sao dia heverinao fa makorela ary aho ?”. Mila mianatra
sy maka lesona amin’ny tontolo manodidina ny tsirairay avy. Maninona moa raha
miara-mianatra izany ny mpivady mba hisian’ny fitoviam-pijery ? Aza menatra
amin’izany satria vadinao io miaraka aminao io.
4- Mifampitaiza sa mifamolaka ? Fandeferana sy fifandeferana
Ny olana amin’ny fanambadiana dia ity fitadiavana lalandava ny fitobohana
(équilibre) ity satria nobeazina tamin’ny tontolo roa samy hafa ny mpivady hany ka
misy hatrany ny fifandroritana mivantana sy ankolaka ao anaty tokantrano ao.
Rehefa mitaraina amin’ny namany ny vavy na ny lahy dia heno matetika ny valinteny hoe “Aza manaiky mihintsy fa folahy dieny izao voalohany izao”. Torohevitra
tsara ve izany amintsika ? Ny biby no folahiny fa ny olona kosa tezaina. Ary amin’ny
fanambadiana dia ny mifampitaiza no voambolana mifanaraka aminy. Rehefa
mifampitaiza dia misy zavatra ifanakalozana, ifampianarana, ifampizarana. Mety
tsy hitovy ny habetsahan’ny zavatra nifanakalozana nefa ny fandeferana sy ny
fifandeferana no mandrindra izany rehetra izany. Ny zavatra tsapako anefa dia izao,
vitsy amin’ny tanorantsika no mahalala ny tena dikan’izany teny hoe fandeferana
izany satria toa zary efa voasasa ny atidohany amin’ny fomba fisainana tandrefana
mikasika ny fahalalahan’ny tsirairay, ny fitovian-jo eo amin’ny lahy sy ny vavy sns.
Tsy manda velively ny maha-zava-dehibe ireo aho saingy laviko kosa ny
fanapotehana ny toe-tsaina malagasy izay mandala ny fihavanana, ny
fifampitsimbinana, ny fandeferana…Ny tsihy no fola-mandefitra fa ny olom-belona
tsy fola-mandefitra hoy ny ohabolantsika malagasy. Tsy manimba anao ny
fandeferana. Vao mainka aza manandratra anao ho tena olombelona izany.
5- Tokantrano maso, tokantrano ara-dalana, tokantrano amin’ny fomba
Endrika vitsivitsy amin’ny tokantrano misy ihany ireo fa mbola mety miseho
amin’ny endrika hafa tsy ho voatanisa eto. Tokantrano maso moa no iantsoana ilay
tokantrano naorina avy hatrany ary tsy nandalo ireo ambaratonga sy fombafomba
nentin- drazana, ara-piaraha-monina ary ara-panjakana. Tonga dia miara-monina
amin’izao izy roroa. Mety noho ny faneren’ny zava-misy izany nefa koa mety
vokatry ny safidy malalaka noho ny fandrosoana. Azo lazaina fa efa miha-malalaka
ny fomba fisainan’ny mpiara-monina amin’izao fotoana izao. Raha tany amin’ny 30
na 40 taona lasa tany dia ho voaesoeso, voatondro molotra sy voaenjiky ny
manodidina ny mpivady manao tokantrano maso. Ny olana fotsiny dia ny
fanoratana ny rain’ilay zaza amin’ny sora-piankohonana, tsy maintsy manao
fanambarana manokana any amin’ny manam-pahefana ny rain’ilay zaza. Ny olana
faharoa dia ny fiangonana izay mametraka sakatsakana amin’ny fanaovana
batisa/batemy sns ho an’ilay zaza teraka tamin’ny tokantrano maso.
Ny tokantrano ara-panjakana dia mahakasika ireo mpivady vita soratra teny
amin’ny kaominina. Mety nahavita ireo fombafomba nentin-drazana izy ireo nefa
misy koa ireo mpivady izay nisafidy ny handingana izany ka avy hatrany dia nisorapanambadiana. Ho an’ireto farany dia mety hisy fiantraikany ratsy izany amin’ny
lafiny fifandraisana amin’ny fianakaviana.
Ny tokantrano amin’ny fomba kristiana dia ireo fanambadiana nahavita ny dingana
rehetra ka nahazo ny tsodrano avy tamin’ny fianakaviana, ny Fanjakana ary ny
fiangonana. Izany angamba no mba nofinofin’ny ankamaroan’ny zazavavy sa
Saingy ny zava-dehibe dia izao: mifankatia ve ilay mpivady, mifanohana sy
mifanampy ? Mahay mifandefitra ? Tsy antoka ho anao velively ny fanaovanao
mariazy mipoapoaka raha tsy misy ireo zavatra voalaza eo ambony ireo. Tsy
mahagaga raha misy tanora natao raharaha tamin’ny fomba niraratra sy nigagana
nefa iray volana aty aoriana dia mifanaritaka ery amin’ny Fitsarana ! Ninianay natao
taty amin’ny fizarana momba ny fiainan-tokantrano izy ity satria rehefa ao anaty
tokantrano ao vao tsapa ny vokatr’ilay safidy natao momba ny endriky ny
6- Vehivavy ravaky ny tokantrano, vehivavy miasa, vehivavy mpamelona
Kisarin’andraikitra mety hotanan’ny vehivavy ao an-tokantrano ireo. Ravaky ny
tokantrano hoy ireo ray aman-drenintsika taloha, mijanona ho mpikarakara
tokantrano sy mpitaiza ny zaza ilay vehivavy. Efa an-kavitsiana angamba izany
amin’izao fotoana izao. Nefa raha manankatao kosa ilay fianakaviana, vao mainka
mahatsara zavatra izany satria inoana fa tena tsara karakara ilay tokantrano sy ny
ankohonana rehetra. Sady izao koa e: tena asa manokana sy lehibe ange izany
fikarakarana ankohonana izany e! Sa ahoana hoy ianareo ? Vehivavy miasa kosa
hono izao no lamaody hany ka na dia ny terabao aza mihazakazaka mitady
mpanampy hitaiza ilay zanany vao volana iray. Na izany aza mila saintsainina lalina
ny mety ho fiantraikan’izany eo amin’ny fiainam-pianakaviana. Ny karamandRamatoa ve mahaonitra ny vola lany raha sanatria ka latsak’aretina ilay zaza
menavava ? Na izany aza, tena fanampiana ho an’ny lehilahy ny fampidiram-bola
ataon’ny vadiny. Ny vehivavy mpamelona kosa dia ilay vehivavy ihany no mampidibola ao an-tokantrano fa Rangahy kosa mihaninkanina noho ny antony maro
samihafa. Mety tsy fidiny nefa koa mety hifanarahana izany. Nefa rehefa ela ny ela,
mipoitra tsikelikely eny ihany ny olana ary ny mpisintona lakolosy koa marobe ka
saintsaino tsara zalahy e!
7- Mason’ny fiaraha-monina: lehilahy entina amin’ny sangany, vehivavy
manampahaizana kokoa noho ny vadiny …
Ny mpivady afaka mifanaraka foana ry tanora isany fa ny fiaraha-monina mazana
no mamendrofendro. Entina amin’ny sangany hono ny lehilahy rehefa hitan’ny
manodidina fa tsy mahadidy sy mahatapaka amin’izay fanapahan-kevitra raisina ao
an-tokantrano. Ary dia manaiky be sy manaiky tsy fidiny ny didin-dRamatoa izy.
Sary ratsy be izany ho antsika Malagasy satria isika dia mihevitra foana fa ny lahy
no lohan’ny tokantrano. Olona roa samy hafa toetra moa no mivady ka raha
malemilemy fanahy Rangahy dia mety ho lasa fanjakam-behivavy tokoa ilay
tokantrano. Nefa atao ahoana tokoa moa raha tena tsy hanao zavatra ilay lehilahy,
raha malemy loha na mamo lava ka tsy to teny intsony eo amin’ny fiaraha-monina
? Voatery tsy maintsy mandray andraikitra ilay vehivavy hiarovany ny tokantranony.
Mino aho fa raha ataony am-pitiavana izany fa tsy am-pahasiahana fahatany dia
tena zava-tsoa tokoa ho an’ilay fianakaviana.
Ary ny vehivavy manam-pahaizana kokoa noho ilay vadiny ? Tena henatra teo
amin’ny fiaraha-monina io talohaloha teo saingy tsapa fa mivoatra tsikelikely ny
toe-tsaina. Tsy tokony ho olana izany zalahy raha toa ianareo manaiky
hampianarin’ny vadinareo mba hampakatra be be kokoa ny fahaizana sy ny
fahafahanareo manao zavatra iray. Sady vady tiana izany izy no mpampianatra.
Saingy mazana marary ny sofin-dRangahy noho ny tsikera etsy sy eroa ka miteraka
hambo-po diso toerana. Tsy vitan’izany fa mety be be kokoa ny vola ampidirindRamatoa raha miohatra amin’ny an’ny lahy. Mety hampifamahofa zavatra betsaka
izany koa tsara raha mifampiresaka ny mpivady mba handrindrana ny fiarahamiaina ao an-tokantrano.
8- Anjara andraikitry ny lahy sy ny vavy
Vao naminavina ny hivady dia efa tokony nofariparitana ireo andraikitra ireo. Tsara
raha misy fizarana andraikitra sy fandrindrana andraikitra eo amin’izy ireo.
Malalaka ny safidin’izy ireo ka rehefa hifanaraha dia tsy mampaninona mihintsy
izany lehilahy mamitra tain-jaza izany na koa manasa ny silipin’izy roa. Nefa tsy azo
ekena kosa angamba raha Ramatoa irery no asainao mibata vary gony iray hafindra
any an’efitra ! Izaho aza manoro hevitra hoe ataovy gaga ny fiaraha-monina fa
tena mahay mifampizara andraikitra ianareo roa ary mahavitra zavatra tsy
mahazatra ny hafa.
9- Dia ahoana raha kilemaina tampoka ny anankiray ?
Tsy resahiko eto ny safidy hitia sy hanambady olona kilemaina. Saingy mety ho lasa
kilemaina tampoko sanatrian’izany ny iray amin’ny mpivady vokatry ny loza
nitranga. Io kilema io dia mety hitarika tsy fahafahana miasa sy mamelona ny
ankohonana. Adidin’ilay matanjaka anefa no mandray an-tanana samy irery ny
fiainam-pianakaviana no sady mampahery ilay tra-doza. Zavatra sarotra izany ary
mila fandavan-tena be mba hiarovana ny fifankazahoana ao an-tokantrano. Eto
angamba dia ny fitiavana no fanoitra manampy ilay matanjaka hiatrika lalandava
ny adidy aman’andraikiny. Ary amin’ny zava-misy toy itony no ahatsapanao ny tena
fitiavanao ilay andefimandrinao.
10-Miomana amin’ny vanim-potoanan’ny krizy ara-panambadiana
Tsy misosa foana akory izany fiainana am-panambadiana izany fa tsy maintsy
lalovana krizy eny an-tenantenany eny. Misy manam-pahaizana sasany milaza fa
afaka taona dimy niraisan-trano dia manomboka ny disadisa izay mety handrava
ilay tokantrano mihintsy raha tsy mitandrina ny mpivady. Tsy voatery ho io vanimpotoana io anefa no hitrangany. Ny fakam-panahy koa marobe ka samia
mitandrina. Ny mpivady tsy voatery hitovy hevitra foana manoloana trangan-javatra
iray, mety hisy ny fifamaliana ary mety hiady mihintsy aza izy roa. Nefa tsy misy
vahaolana afa-tsy ny fifampiresahana. Eto koa no ilana fandeferana sy
fifandeferana eo amin’ny mpivady. Ary aoka tsy ny hafa no hibaiko izay fomba
hitondranao ny tokantranonao, aoka tsy hisy hitsabaka amin’ny fitantanana azy na
iza izy na izy. Raha sendra misy ny olana dia meteza re hampihavanina ianareo,
apetraho amin’ny toerana tokony hisy azy ny hambo-po ndrao manimba zavatra.
Ny idealy izany dia ny tsy hisorohana ilay krizy akory fa ny fahasahiana hiatrika
izany amin’ny saina tony sy amim-pahendrena.
11-Fandrindrana ny anjara toeran’ny havan’ny lahy sy havan’ny vavy/ ny ray
aman-dreny/ ny iray tampo/ ny havana ary ny namana eo amin’ny
fiainana ao an-tokantrano
Marina fa olona roa no nivady saingy misy fiantraikany izany eo amin’ny lafiny
fifandraisana aman’olona. Mety ho hita taratra eto ny tarazo tamin’ny fitaizana
fony mbola teo anivon’ny ray aman-dreny. Noho izany mila mianatra mifandray
“amim-pitiavana” amin’ny havam-bady sy ny naman’ilay vadivadiana. “Amimpitiavana “ hoy aho fa tsy am-pihatsaram-belatsihy toy ny fahita tato ho ato. Ilaina
ny fifaneraserana amin’izy ireo mba hisian’ny fifankazahoana am-po. Ary aza adino
ilay fomba fiteny malagasy, fomba fisainana tena feno fahendrena hoe “Fozalahy
natakalo fozavavy” ianao io. Mila mianatra mizara fitiavana fa tsy hoe ny havanao
hatrizay ihany no havanao.
Tandremo koa anefa fa misy fomba fiten’ny Ntaolo manao hoe “Rafozan-doza sy
vinanto tsy vanona” izay mety hamaritra ny fifandraisan’ny vinanto (vavy indrindra
indrindra) sy ny rafona (rafozam-bavy indrindra indrindra). Na ratsy na tsara izy dia
iny no rafozanao ka aoka tsy ianao no fototra hampisaraka ny mpianakavy.
Mazana rehefa mifamaly noho ny fihetsiky ny havam-bady na namana dia velona
ny fomba fiteny hoe “iny reninao iny, iny anabavinareo iny, io namanao io…”. Efa
midika sahady izany fa manavakavaka ianao no sady manava-tena. Mety hanimba
ny fifandraisanao amin’ny vadinao ny fomba fiteny toy izany.
Ka inona ary no atao raha tena tsy azo iraisa-monina ny iray amin’ireo havam-bady
? Tsy misy raikipohy afaka mamaha ny olana rehetra ary eto indrindra no
hampisehoanao fa manana toe-tsaina matotra ianao ka tsy miteniteny foana ary tsy
manaonao fahatany. Resaho mangina amin’ny vadinao ilay zava-misy, reseo lahatra
izy mba handray ny andraikitra tandrifiny mba ho hevitra tokana no hijoroanareo
mivady eo anoloan’ilay fianakavian’ny vadinao. Fadio ny famelanao ho irery ny
vadinao amin’ny fandraisana fanapahan-kevitra ka hiala bala hoe “Izay ataonao e
re fa havanao ireo a!”
12-Ny fitantanana ny vola
Na tokana no miasa na samy miasa ny mpivady dia tokony hofaritana mialoha ny
fomba fitantanana ny vola miditra sy ny vola mivoaka. Samy manana ny
fombafomba itondrany izany ny tokantrano tsirairay avy fa ny zava-dehibe dia ny
fisian’ny mangarahara sy ny fifanarahan-kevitra. Ialana lavitra ny didy jadona sy ny
“halatety” izay manombina ampaham-bola ho an’ny havan’ny tena nefa tsy
mampahafantatra izany tamin’ny vadivadiana.
Mazava ho azy fa tokony hiaraha-mamaritra ny laharam-pahamehan’ny
tokantrano, ny fitsinjovana ny hoavy sy ny vody andro ho merika sns. Na izany aza,
tsy vitsy koa ireo mpivady manao “fanambadiam-boalavo ka samy mikepoka izay
azony” nefa dia haharitra manao ahoana moa ny tokantrano toy izany ?
Mety hiteraka krizy ao an-tokantrano koa ny fialana tampoka amin’ny asa. Eo
indrindra no tsy maintsy mifanohana ny mpivady mba hisedra izany fotoan-tsarotra
izany. Misy ny fahakiviana eny am-boalohany fa avadiho no hery handresena ny
Tena fototry ny ady Tompoko ny resa-bola koa mila fahamailoana izany ary mitaky
fitovian-kevitra eo amin’ny mpivady. Tandremo anefa mba tsy hoe tokantrano feno
fahamiramiranana rehefa misy ny vola ary mivadika fimonjimonjiana rehefa tsy
ampy ny eo an-tanana. Tsy tokony ho ny vola no mibaiko ny “atmosphère” ao antokantranonareo fa ny fitiavana sy ny fifankazahoana. Fitaovana fotsiny io vola io fa
tsy tokony ho io no “foto-pisian’ilay tokantrano”.
Atao dokam-barotra mihintsy izao ny fampitrosana sy ny fanamorana izany na eo
anivon’ny banky na ho an’ireo mpampindram-bola madinika. Tratry ny fakampanahy ny tokantrano vao ka mihazakazaka maka entana any amin’ny magazay
lehibe satria namoraina ny fandoavana tsikelikely ireny entana ireny. Tandremo
anefa fa raha vao any am-piaingana ianareo dia efa vesaran-trosa sahady dia tsy
hialam-pahasahiranana intsony. Saino tsara aloha vao miditra amin’ny resaka trosa
satria ny volan’olona tsy maintsy haverina. Tonga dia tsorina eto ny resaka fa raha
rendrarendra fotsiny ho hitrosana (hividy tele, milina fanasana lamba, fitafiana…)
dia aleo hajanona avy hatrany ndrao hampangirifiry ny ankohonana. Ary arakaraka
ny maha-ela ny fotoana hamerenanao tsikelilkely ilay vola no hampidangana azy.
Fampidirana kizo ny tokantrano malagasy ny zavatra toy itony satria tsy lazain’ny
mpampitrosa aminy ny marina rehetra. Ho anareo mpandraharaha kosa dia ilaina
ny mitrosa vola hampiodinana ny orinasanareo saingy mila mailo sy mandinika
tsara ary mba maka hevitra amin’ireo efa manana traikefa amin’ny zavatra toy
izany. Mazava ho azy fa tsy maintsy fanapahan-kevitra iraisan’ny mpivady ny
fitrosana ary eo anoloan’ny lalàna dia tsy afa-misaraka izy roa amin’ny fanefana
14-Ny adidy aman-kavana sy ara-piaraha-monina
Toetra mampiavaka ny Malagasy io ary tena soatoavina tokony hotohizana.
Fanehoana fitiavana ny fanefana ny adidy aman-kavana sy ara-piaraha-monina. Ny
olana anefa dia samy efa sahirankirana ny rehetra ka zary lasa fomba fisainana ny
miala adidy. Mba niangaran’ny vintana ve ianareo mivady ka nomeny tombony
tamin’ny fivelomana ? Aza adino ny mijery sy manampy ny hafa fa tsy mahafaty
antoka izany. “Ka izahay aza zara raha mahita harapaka ka adidy aho adidy !” hoy
ny hafa. Marina ny voalazanao saingy ny fitsinjovana ny havana sy ny namana ange
tsy voatery ho vola e !
Saingy izao kosa, misy fetra sy faritra tokony hapetraka amin’io resaka adidy io
satria raha diso tsara fanahy loatra dia araraotin’ny havana sy namana fetsifetsy.
Mila miaraka mamaritra izay fetra izay ny mpivady. Niala tamin’ny asany hono
Ravalilahy ka nitampify kely tato amin’izy mivady. Lasa ny volana iray, roa telo… dia
mbola eo ihany lery. Tsy mieritreritra ny hitady asa sy hiala amin’izao zava-mitranga
izao. Tsy maintsy hitranga ihany ny olana ao an-tokantranon’ilay anabaviny rehefa
dila ilay fetra tokony hanampiana azy. Mila mitovy ny hevitr’izy mivady amin’ny
zavatra toy itony. Ny idealy izany dia mpivady tsy tia tena, tia manampy ny hafa
nefa koa mahalala tsara ny fetran’ny fanampiana hatao amin’ny hafa mba tsy
hanimba ny tokantranony.
15-Farito sy arindrao ny isan-jaza
Mbola vao mpisipa angamba dia efa tsara atsidika izany resaka izany. Ary
maninona moa raha mba atao adihevitra koa izany resaka izany any an-tsekoly e ?
Mba ilaina ho fantatry ny tanora tokoa manko fa ny siansa dia efa lasa lavidavitra
amin’ny famaritana ny isa sy fandrindrana ny fiterahana.
16-Vady bonaika, vady maditra, vady hendry
Iza amin’ireo toetra telo ireo re no tianao e ? Maro no hitsatsaingoka hoe vady
hendry. Na izany aza samy manana ny famaritany ny atao hoe hendry sy maditra.
Lazao mazava amin’ny vadinao ny famaritanao ireo zavatra ireo. Tandremo fa mety
hihatsara na hiharatsy ny toetran’ilay vady arakaraka ny zava-misy. Anjaranao anefa
no manabe ny vadinao, manamboatra tsikelikely ny toe-tsainy sy toe-pony mba
hifanaraka amin’ilay idealy tianao ho tratrariny. Tolory tanana izy raha mila izany fa
aza tebahana na vasohana. Omeo lanja eo imasonao izy na dia nisy tsy nety aza ny
17-Fanambadiana fihafiana ?
Ohatran’ny voambolana tsy fantatry ny tanora ankehitriny intsony izany fihafiana
izany satria misy eny rehetra eny avokoa ny zava-drehetra. Saingy mila vola sy
fahaizana ny fahazoana azy ireny ! Vokatry ny tsy fahampiana dia mety hihafy ny
ankohonana: sakafo ambany foitra, fonenana tsizarizary, fitafiana tsy maharaka
lamaody … Mety ho diso fanantenana Razazavavy, be haingo fony tovovavy nefa
tsy manana akanjo firy nony nanambady. Fomban’ny fiainana izany. Anjaran’ny
tsirairay no miharitra na tsia ny tokantrano toy izany. Tena tianao ilay vadinao
matoa ianao miaritra izany.
Maditra Rangahy hany ka miaritra ny mafy ny vadiny. Ao ireo hafa milaza fa noho
ny fitiavany ny zanany no iharetany ilay tokantrano. Mijangajanga Ramatoa nefa
tsy hitam-badiny izay hatao. Maro ny antony mety hiteraka io fihafiana io. Mba
ilaina koa anefa ny finoana sy ny fanantenana mba ahafahan’ny mpivady mandresy
ny zava-tsarotra eo amin’ny fiainana.
18-Rehefa tonga ny zaza
Loharanom-pifaliana ho an’ny tokantrano ny zaza ary fahaterahana fitiavana
vaovao ny fitiavan-janaka. Saingy izao e, aoka tsy ho takon’ity farany ny fitiavanao
ny vadinao. Vao mainka mafy orina ny tokantrano rehefa mitambatra ao ny
fitiavam-bady sy ny fitiavan-janaka. Manjary manana tanjona mitovy eto ny
mpivady dia ny hikolokolo ity zaza vao teraka ka hanabe azy ho olom-banona.
19-Miara-manabe ny ankizy
Fanabeazana no resaka eto fa tsy fitaizana fotsiny. Miara-manabe ny zanany ny
mpivady raha tiana ho vanona ny taranaka. Tokony ho hita taratra eto ilay fizarana
andraikitra nofariparitan’ireo izay nikasa hivady. Tsy tokony hisy loatra ny olana
momba ny fiaraha-manabe raha toa ka miara-mitoetra ny lahy sy ny vavy. Tsy
maintsy mitady vahaolana kosa raha misara-toerana izy ireo satria tena ilain’ilay
zaza amin’ny fitomboan’ny sainy ny fahitana azy mivady mifarimbona amin’ny
fanabeazana azy. Toy izany ny koa ny sampona hafa mety hanjo ilay fianakaviana
raha sendra kilemaina noho ny loza ny iray amin’ny mpivady. Ny zava-dratsy
indrindra moa --- ary sarotra ny mamaha ilay olana --- dia ny fahafatesan’ny iray
amin’ny mpivady. Ny fiaraha-manabe manko dia midika hoe fiaraha-mizara sy
maneho fitiavana amin’ilay menaky ny aina. Misy tetikady tokony hapetraky ny
mpivady momba ny hanabeazany ny zanany, ahitana tanjona sy fomba
hanatanteraha izany. Miankina amin’ny firaisan-tsainan’izy roa anefa ny
firindran’izany fanabeazana izany. Sorohina dieny mbola tsy teraka akory ilay zaza
ny tsy hampandringa ilay fitaizana sy fanabeazana.
20-Ity resaka mpanampy ity
Efa zary resaka mahazatra ny rehetra ny fakana mpanampy satria mety samy miasa
izy mivady. Tokony hofaritana tsara anefa ny asa hampandraiketina azy. Ary
saintsainina tsara koa ny fotoana tokony hanomezanao azy ny zanakao vao
menavava. Sarotra ny mahita mpanampy mahatoky no sady mahay ny asany
amin’izao fotoana izao. Tandremo ary fa mety ho loharana miteraka fifandirana ao
an-tokantrano ao ny mpanampy raha toa ka tsy voafaritra tsara ny zo
Tranga fahita matetika koa ny hoe lasa sipan’ny iray amin’ny mpivady ilay
mpanampy. Mba jereo ihany ny mety ho fandehan-javatra raha toa tsy maintsy
hilaozana ny vady noho ny antony maro samihafa. Aleo misoroka toy izay mitsabo
hoy ny fitenenana. Io fotoana fandaozana tokantrano io koa no mety
hanararaotan’ilay mpanampy hampidirana olon-kafa ao an-trano na koa
handehanany mitsoaka miaraka amin’ny entana sy ny vola. Ny fahatokisanareo ny
mpanampy dia tsy misakana velively ny fametrahanareo hatrany am-boalohany ireo
fepetra hiarovana ny tokantranonareo.
Zava-doza izany nefa mety hitranga amin’ireo mpivady. Tokony halavirina aloha ny
fifanomezan-tsiny. Miara-miatrika ny zava-misy izy roa ary amin’ny fotoana toy
itony no tsy maintsy hifanohanan’ny mpivady. Miasa ny fotoana mba handamina
moramora eny ny fikorontanam-po aman-tsaina mihatra amin’izy roa. Ny fitiavana
ihany anefa no handresena izany fikorontanana izany mba ahafahana miainga
amin’ny teboka vaovao. Ho an’ny mpivady tsy niharan’izany, mba miresadresaha
amin’ireo namana efa nidonan’ny fitsapana toy izany dia ho tsapanao hoe hatraiza
ny fifankatiavan’ireo mpivady ireo.
Samy mety momba daholo na ny lahy na ny vavy nefa matetika dia ilay vehivavy no
tonga dia tsinian’ny fiaraha-monina. Ary mahagaga fa raha ilay vehivavy no
momba dia miezaka mitady fomba hafa Rangahy mba ahazoana taranaka, ao ireo
(mody) miera amin’ny vadiny mba hiteraka amin’ny vehivavy hafa. Raha Rangahy
kosa anefa no momba, tsy hanaiky ny hiterahan’ilay ramatoa vadiny amin’ny olonkafa mihintsy izy sy ny fianakaviany ! Eo koa ireo mangataka fisarahana avy
hatrany. Fa ny mafy indrindra dia ilay fandatsana sy fanesoana atao isan’andro
amin’ilay vadinao. Manampy trotraka eo koa ny rafozambavy sy ny zaobavy ary
mitranga eto ny haratsian’ny toetran’ny vehivavy malagasy sasany izay tsy
mihambahamba akory manenji-dresy.
Tokony ho raharahan’ny mpivady ny mandamina ny tsy fisian’ny zanaka: hitsabo
tena ve ary mety handany vola be nefa tsy hahazo vokatra ? Hitaiza ny zana-kavana
? Sa hanangana zaza kamboty? Sa mahita hevitra hafa ? Ny hoavin’ny
tokantranon’izy ireo tokoa no tokony hotsinjoviny ka aoka hisafidy malalaka izay
zavatra tiany hatao izy ireo.
Ary izao koa: ny fakana vady dia toy ny fividianana fiarakodia iray. Raha mandeha
tsara izy teo am-panandramana azy dia mety hisy tsy fetezany any aoriana kely. Tsy
izay anefa no antony hanarianao azy any anaty fanariam-pako ! Ny mety sy ny tsy
mety tamin’iny fiara iny dia novidian’ny volanao miaraka. Dia toy izany koa ilay
nofidianao ho vady. Ny zava-dehibe dia ny fitadiavanao (sy fitadiavanareo roa
miaraka) vahaolana maharitra ka hitondra fahasambarana ho an’ny
23-Miara-miasa manatanteraka tanjona iraisana
Hitantsika tany aloha tany fa vao niomana ny hivady ny tanora roa dia tsara raha
iarahana ny fanomanana miaraka ny raharaha. Rehefa voajoro kosa ilay tokantrano
dia ilaina ny mamaritra miaraka tanjona iray na maromaro. Mampiray saina ny
mpivady ny fanatanterahana izany. Izao anefa, mety hitovy ny tanjona kendrena fa
ny fomba ho enti-manatanteraka izany no samy hafa ka eo no mety hitrangan’ny
olana. Ilaina koa izany ny fampitoviana ny tadin-dokanga momba izany.
24-Fanambadiana sa fiaraha-monina ?
Mipetraka izany fanontaniana izany rehefa hita taratra ety ivelany fa mihena ny
fanehoana fitiavana amin’ilay vady. Ho an’ny ankamaroan’ny olona anefa dia toa
“zavatra mandeha ho azy” izany fanambadiana izany hany ka mangatsia-dava eny
ny tokantrano na dia tsy mifamaly aza ny mpivady. Vao mainka hamafisin’ny taona
mifanesy izany ka manjary toy ny mpianadahy sisa ireo mpivady ireo, miaramitoetra sy miara-miaina fotsiny. Ary ny zava-doza dia tsy mahita tsirony intsony
amin’ny fanambadiana saingy noho ny henatra ny fiaraha-monina sy ny fiangonana
dia miharitra ao fotsiny.
Eto koa dia mila famakafakana manokana ity lohahevitra ity nefa ny boky eto ampelatanantsika dia mikendry fotsiny hanafosafo izany olana izany. Ny marina dia tsy
fiaraha-monina fotsiny akory ny fanambadiana fa misy fitiavana ifanehoan’ny
mpivady ao ary mila fiarovana sy fanamafisana amin’ny fotoana rehetra izany
fitiavana izany. Mba mizara re isika Malagasy mifaneho fitiavan’ny mpivady tsy ho
an’ny mpivady ihany fa eo anoloan’ny mpiara-monina ihany koa. Ary aza atao
sakana mihintsy ny fandrosoan’ny taona ka hilazana hoe “raharahan’ny tanora
izany fitiavana izany”. Ny maty vady aza efa tsy fidiny koa nahoana no tsy mba
araraotina ny fotoana mbola mahavelona anareo roa miaraka ? Ataovy tsapan’ny
zanakareo fa tena mifankatia ary vao mainka aza mifankatia be be kokoa ianareo.
25-Mianatra dieny izao hiatrika ny fahanterana
Miha-antitra ny zava-miaina rehetra, fomban-javatra izany ka tsy tokony
hatahorana. Saingy mila fanomanan-tsaina sy fanolokoloam-batana izany.
Omanina ny atidoha tsy hatoritory. Jereo ange ry zareo vazaha fa miverina mianatra
indray rehetra mipaka ny fotoanan’ny fisotroan-dronono. Mila mitozo mianatra
zava-baovao hatrany mba tsy ho vahiny manoloana ny fihazakazaky ny teknolojia.
Mila omanina koa ny fomba fisainana tsy hikatso ka hanjary ho kizitina lava no sady
be tai-paraky. Tsy fanambaniana akory izany fa izany no sary hitan’ny tanora
amin’ireo zoky be taona. Ny marina dia izao e : aza mihady tatatra hanelanelana
anao amin’ireo tanora manodidina anao, aoka ezahina kosa ny hisian’ny tetezana
hifampitana. Mila mahay sy mamantatra ny fomba fitenin’ny zatovo, ny fomba
Ankoatra izany, mila omanina ny fitaizana ny vatana amin’ny alalan’ny
fanatanjahantena. Aza adino fa vao mipaka ny faha-50 taonanao dia efa mihena 30
ka hatramin’ny 50% ny herim-batanao. Havaozy dieny mbola tanora ianao ilay
sarinao rehefa antitra tsy ho olona mifararemotra, marary lava, verivery saina…
Mbola ilain’ny fiaraha-monina ianao koa omany ny andraikitra vaovao hotananao
rehefa mby amin’ny fahanterana. Averiko indray fa tsy mapahatahotra ny
fahanterana, tsy mahamenatra ny atao hoe antitra.
Reharehan’ny mpivady izany ary tokony ho antoka ho an’ny fahanteran’izy ireo
raha hainy ny nanabe ireo menaky ny ainy. Ary dia miampy indray izany ny isan’ny
mpitafatafa sy mpiady hevitra ao an-tokantrano ao. Efa tokony hampitaina
tsikelikely eo an-tanan’izy ireo ny adidy aman’andraikitra isan-karazany. Omena
hasina koa izy ireo mba handray anjara amin’ny fiainan-tokantrano. Tsy ilaozan’izay
fifandirana eo amin’ny zanaka sy ny ray aman-dreny noho ny faha-samy hafan’ny
fomba fijery sy fisainana saingy zarina ny ankizy hitana hatrany ilay fifanajana eo
amin’ny zoky olona sy ny zandry olona.
Mazana dia ny lehilahy mampirafy hatrany no tena resahina na dia mba manao toy
izany koa aza ireo vehivavy sasany. Maro be moa ny antony mahatonga ny
fampirafesana fa raha bangoina dia ny tsy fahaiza-manohitra fakam-panahy
amin’ny firaisana ara-nofo. Raha tahiny mitranga izany ny olana toy izany dia ny
fifampiresahan’ny mpivady ihany no vahaolana tsara indrindra mba tsy hisian’ny
gidragidra izay mety hamotika tanteraka ilay tokantrano. Misy mantsy, ohatra,
vehivavy tonga dia mamaly faty an-dRangahy avy hatrany ka iny koa izy manao sipa
mba “hanalany ny fony”, hono. Ao koa ireo lehilahy (izay mazana manao sipa etsy
sy eroa !) no be hambo-po ery ka tsy tia intsony ny vadiny izay nanao sipa satria,
hono, “efa nolotoin-dry zalahy” ilay Ramatoa !Mila hendry isika rehetra satria
fihetsika kely mibirioka dia mety hanimba fiainana iray manontolo.
Ny zavatra mahalasa saina dia ity, zary lasa “lamaody” ho an’ny fiaraha-monina
ankehitriny ny fampirafesana na dia fantatra mialoha aza ny mety ho vokatra ratsy
haterany. Jereo ange ireo karazana sarimihetsika asehon’ny televiziona antsika e !
Eo koa ireo tononkira fihainontsika an-davanandro. Mihondinkodina amin’io
fampirafesana io ny lohahevitry ny ankamaroan’izy ireny. Midika izany fa ny zanaka
izay mpanaraka ny fandaharana toy ireny dia voatefy tsikelikely hampirafy raha vao
manandrana fotsiny ny fitiavana. Aleo ary rey olona beazina dieny mbola kely ny
ankizy hankahala izany fampirafesana izany.
28-Ny toaka sy ny zava-mahadomelina hafa
Matetika dia ny fitarihan’ny naman-dratsy no mahatonga ny olona (na lahy na
vavy) hidoroka toaka sy zava-mahadomelina hafa. Mety azo tsaboina amin’ny
anatra sy fifampiresahana ihany izy ity raha mbola eo am-piandohana. Saingy
mazana no lasa miaritra fotsiny sisa ny iray satria tsy tiany ho rava ny tokantranony.
Midika izany fa tsy tokony ho varimbariana ny tsirairay amin’izay fandehan’ny
fiainana ao an-tokantrano ao satria aleo misoroka toy izay mitsabo. Aza adino
anefa fa mila fanohanana maharitra ny mpidoroka mba ahafahany miala tsikelikely
amin’izany zava-dratsy izany. Tsy vitan’ilay vady irery intsony ny mamaha ny olana
toy izany koa ilaina ny fanampian’ny hafa raha mbola tiana ilay tokantrano.
Loza mihantona ho an’ny fianakaviana io zavatra io. Nisy namako izay nanambady
lehilahy mpiloka. Faly ery izy fa mividy izay karazan’entana tiany rehefa mahazo
vola rangahy. Saingy indrisy fa toy ny nofinofy fotsiny ny fananany izany televiziona
lafo vidy izany na koa ny fatana mandeha etona… satria raha vao “banky” ilay
vadiny dia amidiny daholo ny zavatra ao an-tokantrano ! Ny tena tsy tantin’ilay
namako indrindra anefa dia ity : namidin’ilay rangahy hatramin’ny akanjon’ilay
zanak’izy ireo ! Teo vao tena tsapan’ilay ramatoa fa tsy azo tsaboina intsony ny
aretin-dokan’ny vadiny koa dia tapaka ny heviny fa hisaraka aminy izy. Ary dia rava
ny tokantranon’izy ireo. Tandremo fa samy mety ho voan’ny viriosin-doka na ny
lahy na ny vavy ary amin’ny fianakaviana sasany aza dia izy mivady mihintsy no
indray mandeha any amin’ny “casino”. Mila tezaina ho tia asa ny zanaka ao antokantrano fa tsy hanantena vintana mba ahazoam-bola. Ny olana koa dia ny
fahamoran’ny lalao elektronika sy ny lalao video amin’ny finday. Tsy misy resaka
vola loatra izy ireny fa dia sarihina tsotra izao fotsiny ny tanora hifaninana sy
hifampikatroka mba ahaozana isa ambony. Tsy vita intsony ny fianaran-desona sy
ny raharaha ao an-trano ary miha-marary ny maso sy ny loha. Mila miray loha ny
mpivady eto ka miaraka mamaritra ny tena kilalao mety amin’ny zanany, ny
fotoana hanomezany finday azy ireo ary koa ny karazana finday fanome ny tanora.
30-Ny fitiavana tafahoatra zavatra/olona iray
Ny loza dia io zavatra io na io olona io no hatao ambonin’ny zava-drehetra ao antokantrano. Jereo ange ny zava-misy amin’izao e: mpivavaka amina fiangonana iray
ohatra ilay ramatoa, niova fo tanteraka ka nirotsaka amin’ny andraikitra izao na
izao. Miala maraina ao an-trano “hanao ny asan’Andriamanitra” ary ny takariva vao
miverina. Tavela ny fikarakarana ny ankohonana, tonga ny disadisa sy ny
fifamaliana satria mety manaraka azy hatramin’ny ampahany betsaka amin’ny vola
ao an-trano… Ao koa ohatra ralehilahy sy ny fitiavany baolina kitra tafahoatra
loatra. Mety ho hita koa ny fitiavana haingo sy firavaka, ny fandaniana vola
hanaingoana sy hanamboarana isan’andro lava ny fiarakodia sns. Mampiady ny
zavatra toy izany satria lasa bodongerona sy didy jadona ary hevitr’olon-tokana no
tsy maintsy hampanjakaina ao an-tokantrano ao. Tandremo fa na dia ny fitiavanao
tafahotra loatra io asanao io aza dia mampihen-danja ny fitiavanao ny vadinao sy
31-Mifaneho ivelany ny fitiavana
Raha ny marina dia tokony ho boky iray manokana no enti-mamakafaka ity
lohahevitra ity satria tena zava-dehibe loatra izy io. Sady tsy talentan’ny ray amandrenintsika loatra io fanehoana ivelany ny fitiavana. Asa na noho ny henatra na
noho ny fiheverana fa zava-pady ny fanehoam-pitiavana na koa ny fisainana fa
“mandeha ho azy” izany resaka fitiavana izany.
Mba jereo ange ny fitaizana ny zaza menavava iray e. Samy manorokoroka sy
manafosafo ary manambitamby azy daholo ny mpianakavy sy ny mpiara-monina
aminy. Handringa ny fitomboan’ilay zaza raha tsy ampy ny fanehoam-pitiavana azy
toy izany. Mila fanehoam-pitiavana amin’ny fotoana rehetra sy amin’ny toerana
rehetra ny tsirairay avy amin’ny mpivady. Ny fomba hanaovana izany no mety ho
samy hafa ary mazàna izy roroa ihany no mifankafantatra ny karazana fomba
Aza menatra maneho fitiavana amin’ny andefimandrinao e! Azo atao izany rehefa
mifanaraka sy manaja ny kolotsaina malagasy. Tsy voatery hifanorokoroka andalambe toy izay mahazatra an-dry zareo Tandrefana akory isika. Ny zavatra tsapa
dia efa maro ireo mpivady malagasy --- na tanora ireo na efa nahazo taona --- no
mahasahy mifampitantana eny an-tsena na eny an-dalana eny. Zavatra tsy fahita
firy izany tany amin’ny roapolo taona lasa tany !
Efa mahazatra ny rehetra koa angamba ny teny mamy na koa ny f(if)anolorana
fanomezana kely, tsara raha tsy hiandrasana tonon-taona sy fitsingerenan’ny andro
nahaterahana vao manao izany. Ho an’ny sasany aza dia ny hampiontana (amin’ny
lafiny tsara a!) ny fon’ilay vadiny no kendreny ka mahavita manomana ilay zavamiseho mihintsy izy.
Tokony ho kolotsaina sy soatoavina hindrahindrain’ny Malagasy io fanehoampitiavana ivelany io mba ahatsapan’ny zanaka ny maha-zava-dehibe ny fitiavana.
Endrika iray enti-manabe ny taranaka ihany koa izany.
HIRAY KARAN-DOHA SA HISARA-BELONA ?
Ny hamisavisana ny ratsy hono mba hihavian’ny soa hoy ny Ntaolo malagasy. Misy
fetrany ny fiarahan-dalana satria lalanan’ny fiainana izany. Aza mihevitra fa na dia
efa 50 taona nivadiana aza ny mpivady dia tsy hangataka fisaraham-panambadiana
! Ny zaza fito koa ange tsy mahafehy trano e ! Saingy raha mbola azo atao dia aleo
ny fahafatesana no hampisaraka fa tsy ny olombelona.
1- Maty vady
Tsy mba fomban’ny olona ny maminavina ny zavatra toy izany hany ka tsy maintsy
mafy foana ny fidonany. Ny olana anefa dia ity: raha olon-tokana hatrany no
mampidi-bola ao an-tokantrano dia mety hatahorana ny hoavin’ilay fianakaviana
manontolo. Aleo dieny mbola any am-boalohany dia efa mifampitsinjo, mifanampy
ary mifanohana tsara ny mpivady. Adidy mavesatra ho an’izay tavela eo ny
fiandraiketana ny ankizy mbola tsy mahaleo tena. Tsarovy fa ny mpiray tampo sy ny
fiaraha-monina dia manampy fotsiny fa izay tavela eo no tena tompon’andraikitra.
2- Mety ho rava tokantrano amin’ny fotoana rehetra
Asa raha ny fandrosoana no mihazakazaka mafy fa efa marobe ny tranga toy izany
amin’izao fotoana izao. Ao ny vao vita mariazy latsaky ny herintaona monja nefa
dia efa misaraka sahady. Misy koa ireo zokiny efa nahalehibe zanaka (ary efa
manan-jafy aza ny sasany) no tsy mahazaka intsony ny firaisa-monina ka misitaka
ary dia misaraka. Loza mananontanona ny tokantrano amin’ny fotoana rehetra
izany ny fahapotehana koa aoka samy hitandrina.
3- Hanambady fanindroany sa hitoetra irery mandra-pahafaty ?
Fanontaniana saro-baliana io. Mazava ho azy fa ho sarotra ny hahita izay olona
tena sahaza ny tena, sarotra koa ny hanavao fiainana satria raha tsy mitandrina dia
mety hiverina indray ilay olana teo aloha. Tsy mora koa anefa ny hitoetra irery tsy
misy mpikarakara. Ity fahafahana misafidy ity izany rey olona tsy mitondra
fahasambarana foana akory ! Sarotra ny miaina koa aleo misaintsaina tsara izay
Resaka mitohy ity fanambadiana ity. Tokony hasiana sehatra hifampitaizana
momba izany satria voakasiky ny resaka fitiavana sy fanambadiana ny olon-drehetra
izay efa mahatsiaro saina sy afaka mieritreritra. Ny famerana io resaka io hatreo
amin’ny fanomanana ny raharaham-panambadiana fotsiny dia tena fahadisoana
Mivoatra hatrany ny fifandraisana: mifanintona sa mifampitsipaka ? Ny fomba
fisainana hitondrana ny fiainana angamba dia ity : mila mifankafantatra izay hivady
sy ny efa mpivady. Mila miara-mikatsaka ilay fitobohana (équilibre) mba
hamenoana ny banga sy ny tsy fitoviana.
Ny zava-kinendrintsika tamin’ity boky ity izany dia ny fanomanan-tsaina sy
fanabeazana dieny mbola kely mikasika ny fanambadiana sy izay lohahevitra
rehetra manodidina azy io.
Anjara asa tsy an’ny mpivady irery fa an’ny lafin-kavana sy ny fiaraha-monina
ankapobeny izany. Ilaina trandrahana tsara ohatra ny zava-tsoa atolotry ny
fanambadiana izay “tena mifototra amin’ny fivavahana kristiana”.
Ny tanjona faratampony dia ho Firenena vanona isika satria fianakaviana vanona
nampanjarian’ny fiaraha-monina izay manao ho zava-dehibe --- eny ho zava-masina
aza --- ny atao hoe fanambadiana.
Natao teto Avaratsena Ambohidrapeto
©Memeldono Ambohidrapeto 2017
FIDILALAO F. Henriel dia niofana ho mpampianatra teny
frantsay tao amin’ny Ecole Normale Supérieure Ampefiloha ary
nampianatra teny frantsay amam-polo taonany tao
Antanananarivo sy tany amin’ny faritany. Fantatra koa izy eo
amin’ny tontolon’ny fampiasana ny teny ESPERANTO satria
nandalina ny fampianarana izany tany ivelany ary lasa
mpampianatra teny ESPERANTO manerana ny Nosy.
Mpanoratra tononkalo sy boky tantara amin’ny teny
ESPERANTO no sady mpanoratra boky fianarana io teny io
ihany koa izy. Vao tsy ela akory izay izy no nanangana “radio web”
ary tompona gazety samy amin’ny teny ESPERANTO.
Lohahevitra mahaliana ny mpanoratra ny fanabeazana ary singa iray
amin’izany ny momba ny fanambadiana izay tataovan-doza tokoa amin’izao
fotoana izao raha jerena ny salanisan’ireo mpivady mitaky fisarahana. Raha
dinihina dia tokony mbola vao eo ankohonan’ny ray aman-dreniny dia efa
beazina amin’izany resaka fanambadiana izany ny tanora. Izany no tena
tanjon’i Henriel tamin’ny nanoratany ity famelabelaran-kevitra ity.
TSY KI-VADIVADY FA TENA IZY.pdf (PDF, 267 Ko)
fanambadiana tanora tokony fomba anefa tsara mpivady izany olona tokantrano fitiavana monina satria zavatra rehefa
Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00557695.